मंसिर १६, काठमाडौं । मंगलवार लाभांश सार्वजनिक गरेको नेपाल बङ्गलादेश बैंकको शेयरमूल्य ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेको छ । १ बजेर ३० मिनेटसम्मको कारोबार अवधिमा उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १७ ले घटेर रू. ३०० मा झरेको हो ।
कम्पनीले यस वर्ष ८ दशमलव ४२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को लागि ६ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि २ दशमलव ४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त कम्पनीको मंसिर १५ गतेको सञ्चालक समितिले गरेको यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात वितरण हुनेछ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष उक्त कम्पनीको लाभांशमा कमि आएको हो । कम्पनीले गत वर्ष ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ७ प्रतिशत नगद लाभांश सहित १२ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो ।